Ojiji nke GIS iji chịkwaa na igbochi Dengue - Geofumadas
N'ebe anyị nọ na Mesoamerican na ebe ụwa na-ekpo ọkụ n'ozuzu ya, Dengue bụ ọrịa nkịtị na ọnwa nke oge udu mmiri. Mara ebe ọnụọgụgụ kachasị nke na-eme bụ n'ezie mmega ahụ nke ngwa GIS na-enye nsonaazụ bara uru.
Echetara m na mgbe m bụ nwata, dengue anaghị egbu egbu dị ka ọ dị ugbu a; obere izu ụka ezumike, ahụ mgbu, ọtụtụ mmiri mmiri na ụta nke enweghị ike igwu egwuregwu bọọlụ dị mma n'ime apịtị na ndị enyi si agbata obi. Taa ọ na-egbu egbu, ma ọ bụrụ na mmadụ anaghị aga dọkịta, ha nwere ike ịnwụ n'ime ụbọchị abụọ na nnukwu mpịakọta nke platelet.
Ma nsogbu dengue na obodo mepere emepe nke Mesoamerica adịghị mfe. Ahụhụ a bụrụ ọnụ (Aedes aegypti) bi na mmiri na-asọ oyi, n'ihi ya, ọ nwere ike ịdị ka taya na ala ohere dị ka ite nke osisi. N'ikpeazụ, ụzọ iji lụso ya ọgụ bụ mbibi nke hatcheries jikọtara ya na fumigation. Na-enweghị ebe gbasara ozi, ọrụ a nwere ike enweghị njedebe ma ghara ịmị mkpụrụ.
Ihe omumu na-adọrọ mmasị na itinye nke Geographic Information Systems iji mee nchọpụta na ahụ ike bụ banyere Taiwan. Ebumnuche bụ iji nyochaa etu anwụnta ndị bu ọrịa si ebufe n'etiti ebe obibi ma, n'ụzọ dị otu a, chọpụta ụzọ ụzọ isi bufee n'etiti oge ọ bụla. Ya mere, a na-atụle akụkụ mbara igwe na oge ụfọdụ n'otu oge.
Site n'inweta netwọk gburugburu ebe obibi, ndị na-eme nchọpụta nwere ike ịchọta ebe obibi nke anwụnta na-egbu ma gbakọọ ụzọ dịgasị iche iche nke njem ha ma gbochie ha ịkwaga n'akụkụ ụzọ ndị a.
Dabere na nsonaazụ nke nyocha a, na-emebi ike nke njikọ nke netwọkụ ihe njikọ obibi site na igbochi paseeji nnyefe nke anwụnta na-ebute ọrịa, mgbasa nke ọrịa dengue nwere ike ịchịkwa nke ọma. Ebumnuche nyocha atọ bụ:
Na-eji nyocha ntanetị gbasara gburugburu ebe obibi iji chọpụta ụzọ nnabata a na-enyo enyo maka mmegharị nke anwụnta na-ebute ọrịa n'oge na n'etiti oge ọ bụla.
Mee ka nkwenye ahụ metụtara njikọ dịgasị iche iche ntinye aka iji gbochie mgbasa nke anwụnta.
Nabata GIS sọftụwia iji jikọta data nyocha na nsonaazụ yana gosipụta ozi na maapụ ahụ.
N'ihi ya, enwere ike inweta ihe ndị a:
Ọgba oge nke ọrịa dengue.
Abịa na mgbasa oge-mgbasa nke ọrịa dengue, mmegharị mmadụ na ngagharị nke anwụnta na-efe efe nwere njikọ. Ka anyị cheta na ụgbọ elu nke anwụnta adịghị elu karịa 100 mita, nke pụtara na isi mmalite nke oria a kapịrị ọnụ; ya mere mgbasa ya ji nwayọọ nwayọọ gbasaa. Ọ bụrụ na enwere ike ịchọpụta ụzọ ahụ, ndị agha mpụga nwere ike ịmachi ya. Yabụ, enwere ike ịchọpụta ma gosipụta isi ụzọ nnụnnụ nke anwụnta na ngwanrọ GIS, yana mpaghara ebe a na-atụ aro ka ewepụ ya na-egosikwa na ikpo okwu GIS iji chịkwaa mgbasa nke ọrịa ahụ. dengue.
E jidere, tụlee ma gosipụta data dị mkpa na Centlọ Ọrụ Taiwan maka Nchịkwa Ọrịa na nyocha n'elu GIS iji chọọ isi ụzọ nnyefe maka anwụnta na-ebute ọrịa. N'ikpeazụ, emere nkwado maka mkpochapụ ụzọ ndị a dị mkpa iji mebie mmekọrịta dị n'etiti ike nke ebe obibi ọ bụla na iji nweta ebumnobi nke igbochi mgbasa.
Ogologo oge maka ebe obibi na ije nke anwụnta.
Ugboro oge nke netwok bu nke mejuputara uzo na uzo di iche-iche. Ọnụ ọ bụla na-egosipụta ebe obibi ebe a na-ahụ akwa anwụnta, a na-eke ya n'etiti etiti etiti ahụ na oyi akwa. Ahịrị nke ọ bụla na - ejikọ ọnụ abụọ na - anọchi anya ụzọ abụọ ebe anwụnta na - esi agagharị. Ọzọkwa, a ga-ekewa ahịrị ụzọ abụọ nke njikọ jikọtara ọnụ abụọ n'otu oge akwa akwa ma ọ bụ oge oyi akwa dị iche. Ahịrị siri ike na-anọchi anya corridor nwere ike ịnyefe n'otu oge, ọ bụrụhaala na njedebe abụọ ahụ dị n'otu oge oyi akwa. Ka ọ dị ugbu a, akara akara akara na-anọchi anya nnweta nnweta nnweta ga-ekwe omume site na oge abụọ, ọ bụrụhaala na njedebe abụọ dị na ọkwa oge dị iche iche. A na-ewu ụlọ anwụnta anwụrụ nke ụlọ ebe obibi site na ụkpụrụ a dị n'elu.
Nyochaa mkpa nke njikọ ọ bụla
A na-enyocha nyocha ndị ahụ n'ime nkọwa ntanetị gbasara gburugburu ebe obibi na nyocha oge iji kọwaa ihe njikọ ọ bụla. Ọzọkwa, njirimara nke topologies ndị agbata obi ga-eme ka o kwe omume ịkọwapụta mmekọrịta mmụgharị nke vector.
Njikọ ụdị na àgwà
Dika njiri mara nke njikọ nke otu ihe di na otu ma obu na oge di iche iche, na nsonaazụ nke nyocha nke gunyere njikọ uwa na njiko nke obodo. A na-ahụta njikọ ahụ dị ka nke kachasị mkpa. Otu ihe dịpụrụ adịpụ na ụzọ dị mkpa nke nnyefe nke anwụnta na-efe efe na otu ihe. Tụkwasị na nke ahụ, njikọ dị n'otu oge ma ọ bụ dị iche iche na-ekpughe ike dị iche iche nke ibute. Ntughari nke uzo di iche iche nke uzo di iche iche na GIS Software, na-enye ohere iji anya nke uche uzo mbu nke mbu wuru ma n'otu oge na oge di iche.
N'okwu a, a na-eji mmega ahụ eme ihe Kọlọtọ SuperGIS
Nke a abụghị ihe ọhụrụ. Anyị na-echeta maapụ Dọkịta Snow maka nchọpụta dengue. N'okwu a, nnweta anyị nwere na teknụzụ dị iche na na kama ịbụ nsị mmiri dị ka n'oge ndị ahụ, ọ bụ vector
Maka ozi ọzọ, ị pụrụ ịhụ na peeji nke nke Supergeo Teknụzụ.
Previous Post«Previous UPSOCL - Ebe mkpali
Next Post Otu esi mepee, kpọọ, ma kpoo faịlụ .shp na Microstation V8iNext »